Ungathenga igalelo leAmazon Echo ngesaphulelo se-15 se-euro | Iindaba zeGajethi
IAmazon ihlala ivuma ukumilisela izaphulelo ezinomdla kwiimveliso zayo zeAmazon Echo xa zisandula ukwenziwa, oko ke kuthabatha elona nani liphezulu labasebenzisi abanokubakho, isicwangciso esisebenze eSpain sisebenze kakuhle kakhulu nezinye izixhobo kuluhlu olufana I-Echo Spot kunye ne-Echo Dot.
Ngeli xesha, Igalelo leAmazon Echo lifumana isaphulelo seeyure ezili-15 xa usithenga kule veki ungachithi, isixhobo esincinci esinokwenza phantse nasiphi na isithethi ekhayeni lakho okanye eofisini "smart", indlela iAmazon efuna ukulwa neGoogle Chromecast ephumeleleyo.
Sele sinayo ezandleni zethu, esi sixhobo sincinci sincinci kwaye sijikeleze ngokupheleleyo ukuba unakothenga kule khonkcoOko besikuvavanya kwaye ukubonakala kwethu kokuqala kulungile. Inonxibelelwano olulula olusebenzisekayo, kuya kufuneka uyixhume kumbane usebenzisa ikhebula le-microUSB kunye neadaptha yenethiwekhi ebandakanyiweyo kwiphakheji ngokwayo, kwaye ufake usetyenziso lwe-Alexa lwaso nasiphi na isixhobo se-Android okanye se-iOS ukuze ube nakho ukonwabela kuyo, kwimizuzwana embalwa, uya kuba nakho ukonwabela umncedisi weAmazon ngokubonakalayo nasiphi na isithethi.
Olona loncedo luphambili kukuba lusivumela ukuba silungelelanise nesithethi "esingenangqondo" zombini ngeBluetooth nangonxibelelwano lwe-minijack olunayo nasemva. Ke ngokomgaqo awuyi kuba nangxaki kuso nasiphi na isixhobo ofuna ukusisebenzisa ukufumana okungcono kwi-Amazon Echo Input yakho. Njengoko besitshilo, ngoku enkosi kwisaphulelo kwiwebhusayithi yeAmazon ungayifumana nge-24,99 euro (ixabiso eliqhelekileyo le-39,99 euro) kwiinguqulelo zayo ezimbini, ezimhlophe namnyama. Ngamaqhosha amabini kuphela, yeyona ndlela ilula yokuzisa i-Alexa ekhayeni lakho.
Thenga igalelo leAmazon Echo nge-24,99 euro (isaphulelo se-15 se-euro)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Amazon » Ungathenga igalelo leAmazon Echo ngesaphulelo se-15 se-euro